Tonga ny GNOME 41 beta miaraka amin'ny fanatsarana ny interface, tontonana, fanohanana ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Andro maromaro lasa izay GNOME 41 Famoahana Beta voalohany naseho, izay nanamarika ny hatsiaka tamin'ny fanovana UI sy API. Aza adino, GNOME dia nifindra tamin'ny fanontana nomerao vaovao, izay namoahana ny kinova 40.0 fa tsy 3.40 tamin'ny lohataona, narahin'ny asa tamin'ny sampana vaovao 41.x vaovao. Ny isa hafahafa dia tsy mifandray amin'ny fitsapana intsony, izay antsoina ankehitriny hoe alfa, beta ary rc.
Amin'ireo fiovana amin'ity kinova beta GNOME 41 ity misongadina ny fanohanana vaovao an'ireo sokajy ao amin'ny rafitry ny fampandrenesanaHo fanampin'ny zava-misy fa ny firafitry ny rafitra dia misy interface iray hanaovana antso amin'ny GNOME Calls, izay ankoatry ny fiantsoana amin'ny alàlan'ny mpandraharaha finday, dia nanampy fanampiana ny protokol SIP ary niantso tamin'ny alàlan'ny VoIP.
Ankoatra izany, Ny GDM dia manana fahaizana manomboka session miorina amin'ny Wayland na dia mifototra amin'ny X.Org aza ny efijery fidirana ary mamela hampiasa Wayland session ho an'ny rafitra misy NVIDIA GPU izy.
Ny fiovana iray hafa miavaka dia izany ny panneaux vaovao sy ny multitasking dia nampiana ao amin'ny configurator (Ivotoerana fanaraha-maso GNOME) hifehezana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny mpandraharaha finday sy hisafidianana maoderina multitasking, ary koa safidy iray hafa hampiatoana ny sarimiaina.
Ao amin'ny interface of ny kajikajy dia nohavaozina tanteraka, izay izao dia mizatra ho azy ny haben'ny efijery amin'ny finday.
Ny PDF viewer PDF.js natsangana dia novaina tao amin'ny tranokala Epiphany ary nisy mpanakana doka YouTube miorina amin'ny script AdGuard nampiana.
Ny tetiandron'ny planner izao dia manohana fanafarana hetsika ary manokatra fisie ICS. Torohevitra iray vaovao natolotra miaraka amin'ny mombamomba ny hetsika.
Ny boaty fifampiresahana hampifandraisana ireo toerana anahafan'ny antoko fahatelo dia naverina tamin'ny mpamosavy fananganana voalohany.
Ny GNOME Music interface interface dia novaina.
GNOME Shell dia manome fanohanana amin'ny fampandehanana programa X11 mampiasa Xwayland amin'ny rafitra izay tsy mampiasa systemd amin'ny fitantanana fivoriana.
Ny fandefasana dia voalahatra amin'ny 22 septambra 2021 Ary ho an'izay rehetra liana te hahalala ny vaovao efa nomanina dia atolotra izy ireo fananganana fanandramana ny tetik'asa rafitra fiasan'ny GNOME hitsapana an'ity GNOME 41 beta ity. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ianao dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Farany, mendrika hotononina ihany koa navoakan'ny mpamorona GNOMEna katalaogin'ny fampiharana vaovao, apps.gnome.org, izay manolotra ny fisafidianana ireo rindranasa tsara indrindra noforonina mifanaraka amin'ny filôzôfian'ny vondrom-piarahamonina GNOME ary miharo tsy misy tomika amin'ny birao.
Fizarana telo no atolotra: rindranasa fototra, rindranasa mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-monina novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitry ny GNOME Circle, ary ny fampiharana an'ny developer. Ny katalaogy koa dia manolotra rindranasa finday namboarina miaraka amin'ny haitao GNOME, izay marihina ao anaty lisitra miaraka amina sary masina manokana.
Ny mampiavaka ny katalaogy dia miavaka:
Mifantoha amin'ny fampidirana ireo mpampiasa amin'ny dingan-dàlana amin'ny alàlan'ny fandefasana hevitra, fandraisana anjara amin'ny fandikana ny interface amin'ny fiteny samihafa, ary fanomezana fanampiana ara-bola.
Misy dikanteny fandikana momba ny fiteny maro.
Omeo fampahalalana momba ny kinova nohavaozina mifototra amin'ny metadata ampiasain'ny GNOME Software sy Flathub.
Fahaizana mampiantrano rindranasa izay tsy ao anaty katalaogin'i Flathub (ohatra, fampiharana avy amin'ny fizarana ifotony).
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ity katalaogera fampiharana vaovao ity ianao dia afaka manatona ny pitsopitsony ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tonga ny GNOME 41 beta miaraka amin'ny fanatsarana ny interface, tontonana, fanohanana ary maro hafa
Ny Wi-Fi 7 dia manakaiky kokoa ary milaza i Intel fa tena ilaina izany